↑ ၂.၀ ၂.၁ Central Intelligence Agency (2009). "Uganda" Archived 18 October 2015 at the Wayback Machine. The World Factbook
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ&oldid=725913" မှ ရယူရန်
၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။